Benze ezibukwayo kwiMaths neScience - Ilanga News
Home Izindaba Benze ezibukwayo kwiMaths neScience
Benze ezibukwayo kwiMaths neScience
Bathi babonga iqhaza lothisha empumelelweni yabo
UMFUNDI waseNgono High School, eNkandla u-Awanda Dladla oklonyeliswe uMnyango weze-Mfundo KwaZulu-Natal ngokubaqwa-qwada abesilisa esifundazweni kwiMaths neSayensi.
UMFUNDI wasePhendukani High School, eNewcastle, uZakhona Mposula ohambe phambili esifundazweni kwabesifazane kwiSayensi neMaths.
BABONGE othisha babo, balanda ngobunzima bezindlela abafike ngazo ngokwehlukana entanjeni abafundi abagile izimanga kumatikuletsheni wanyakenye, bahlonishwa wuMnyango wezemfundo KwaZulu-Natal ngokuba ngabafundi basezikoleni zasemakhaya nasemalokishini abenze kahle ngokwahlukana kobulili babo.
NgoLwesibili e-Anton Lembede School of Mathematics, Science and Technology eLa Mercy, eThekwini, umnyango uhloniphe bonke abafundi abagile izimanga kumatikuletsheni.
UZakhona Mposula (18), obefunda ePhendukani High School, eNewcastle, uchonywe uphaphe lwegwalagwala wumnyango ngokuba ngumfundi ohambe phambili ngemiphumela ezikoleni zasemakhaya nasemalokishini. Lo mfundi uthole o-A abawu-8; owePhysical Science (100%), IsiZulu (90%), English (87%), Mathematics (97%), Life Orientation (97%), Accounting (98%), Geography (90%) neLife Sciences (92%).
Uklonyeliswe ngezindondo ezimbili ngokuhamba phambili uma kuhlanganiswa iMaths yakhe neScience, wagoduka noweScience ozimele. Engxoxweni yakhe naleli phephandaba, uthi okumsize kakhulu ekufezekeni kwezifiso zakhe, wukuthi akazange alubukele phansi uhlelo oluqhamuke nesikole sakhe ngesikhathi sokubheduka kweCoronavirus nyakenye.
Uthi isikole sasungula umsakazo waso lapho othisha babefundisa besekuthunyelelwa abafundi i-link engadingi i-data.
“Lokhu kungisebenzele kakhulu. Empeleni thina esikoleni kasikaze siphumule ngoba uthisha nothisha ubefundisa ihora lonke simlalele kwi-link. Nathi besingagoqile izandla, besisebenzisa nezikhathi zethu ngoba ekugcineni bekufanele sizicabangele ukuthi othisha bona sebeluqedile olwabo uhambo,” kusho uZakhona.
Uveze nokuthi ngale kwalolu hlelo, bekukhona olunye olubizwa ngeWoza Matric, obelukhuthaza abafundi bakamatikuletsheni ukuba bazibambe ziqine kulesi simo sokudloba kweCovid-19.
“Kukhona konke engiyikhona namhlanje, ngibonga othisha ngomsebenzi wabo abawenzile ukusilekelela,” kusho uZakhona. Uthi uyokwenza iziqu ze-Accounting Science, eWits University, eGauteng.
U-Awanda Dladla (18) waseNgono High School, eNkandla oklonyeliswe ngokubaqwaqwaba bonke abafundi besilisa ezikoleni zasemakhaya nezasemalokishini kuhlanganiswe iPhysical Science neMaths waklonyeliswa ngokuhamba phambili kwiMaths KwaZulu-Natal, utshele ILANGA ukuthi ngesikhathi uMengameli Cyril Ramaphosa ememezela ukuvalwa kwezwe mhla ka-26 kuNdasa (March) nyakenye, yena nabanye abafundi abawu-9, bacela ukusebenzisa ikilasi elilodwa, nebala uthishanhloko wakhe wabavumela.
“Okwangithusa kakhulu ngesikhathi kuvalwe izikole, wukuthi ngasengizwile ukuthi akukho okuzoshintsha emaphepheni esizowabhala. Lokhu kwenza ngahlala phansi ngazicabangela ngekusasa lami ngoba benginamaphupho amakhulu. Ngesikhathi kuvulwa izikole, mina nalaba engangifunda nabo abawu-9, sasesibuyekeza.
“Kwesinye isikhathi bengifunda noma sesihlukene nabo. Ngibonga kakhulu kothisha abasebenze kanzima, bezama ukusisiza nakuba bekunzima, ikakhulukazi ukusebenzisa uhlelo lwa-online ngoba abanye bethu bebenezinkinga ze-data, sibuye sihlushwe yi-network emakhaya,” kusho u-Awanda. Uthe uzimisele ngokuyokwenza iziqu zobudokotela eNelson Mandela School of Medicine e-University of KwaZulu-Natal (UKZN).
Ami kanje amaphuzu alo mfundi; IsiZulu (86%), English (88%), Maths (100%), Physical Sciences (98%), Life Orientation (90%), Geography (86%), Life Sciences (90%).
Previous articleUbanjwe enyangeni ‘obulale abomndeni’
Next articleI-Downs idedele impama kowe-caf